ပြည်သူတွေ ကျပ်တည်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ကူညီနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ ယုန်လေး
သူတို့နှစ်ဦးကတော့ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တော့မှ လက်မ‌နှေးတဲ့ သူ နှစ်ဦးပါ။
သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်နဲ့ ယုန်လေးတို့ သူငယ်ချင်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 ကြောင့် အခြေခံလူတန်းစား ပြည်သူတွေ ကျပ်တည်းနေတဲ့ အချိန်မှာ လက်လှမ်းမီသလောက် လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်ကျပ်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီသွားမှာပါလို့ သူက ပြောပါတယ်။
“တကယ် ဖြစ်ပြီး လူတွေကျပ်တည်းကျပြီးဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်သလောက်ကူမှာပါ မနေ့က မြင့်မြတ် နဲ့ ကျွန်တော် တိုင်ပင်ထားပါတယ် ။ဆန်တွေ ဆီတွေ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် လာလှူမှာပါ . လိူင်သာယာ . တောင်ဒဂုံ ရွှေပြည်သာ . အင်းစိန်ကျွန်တော်တို့ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပေါ့” ဆိုပြီး မတ်လ(၁၄) ရက်နေ့က ယုန်လေးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြောထားတာပါ။
ဒီအလှူကလည်း မကြာခင် ရုံတင်ပြသဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ “အော်ရဂျင်နယ်ဂန်းစကား ၃” ဇာတ်ကားနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ကြောင်းကိုလည်း ပြောထားပါသေးတယ်။မြင့်မြတ်နဲ့ ယုန်လေးတို့ဟာ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လက်မနှေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေပါ။ အနုပညာလောကသားတွေထဲမှာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း လှူဒါန်းလေ့ ရှိတာတွေ့ ရပါတယ်။